Nnyocha Parrot Swing: Ọkara drone ọkara redio na-achịkwa ụgbọelu | Akụkọ akụrụngwa
Icheku Ngabiga analysis, ọkara drone ọkara RC ụgbọelu
Miguel Gaton | | drones, Nyocha
Oge a anyị ewetara gị Icheoku Ngabiga nyocha, minidrone ọhụrụ ahụ sitere n'aka onye nrụpụta Parrot na nke ahụ na-enye anyị echiche na ruo ugbu a, ahụbeghị na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, ngwakọ dị n'etiti drone na ụgbọ elu nke na-enye gị ohere iji ụgbọelu na-efe ụgbọ mmiri na ụgbọ elu na usoro ntụrụndụ dị ụtọ. . Echiche ọhụrụ na-atọ ụtọ nke e gosipụtara dị ka nhọrọ mara mma maka ndị chọrọ enwe efe efe nke ụgbọ elu rc ya na mfe nke drone takeoffs na ọdịda. Ọnụ ya bụ € 139 na can nwere ike ịzụta ya site na ịpị ebe a.
1 Drone + ụgbọ elu, echiche na-atọ ọchị
2 Parrot Swing, ngwakọ dị n'etiti mmiri na ụgbọelu rc
3 Flypad njikwa, a obi ụtọ
4 Autonomy nke drone na njikwa
7 Icheku Ngabiga ọgwụgwụ
8 Ebee ka ịzụta rotgba Etu Parrot?
9 Foto osisi
Drone + ụgbọ elu, echiche na-atọ ọchị
Echiche nke isonye otu ụgbọelu na ụgbọelu n’otu ngwaọrụ yiri ka ọ̀ dị mma; Ugbu a, ihe ịma aka dị mkpa n'ezie bụ ịnweta ma ụgbọ elu mode na-adị mfe ịnya ụgbọ elu na nke ahụ a na-eme mgbanwe n'etiti ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ elu nke ọma na enweghị nsogbu. Na nke ahụ bụ kpọmkwem ike nke icheku Ngabiga; na metụ bọtịnụ dị mfe Anyị nwere ike ịga site na drone gaa ụgbọ elu na nke ọzọ na oge niile ị na-enwe mmetụta nke ịchịkwa ngwaọrụ 100% na ịnweghị ụdị ihe egwu ọ bụla.
Na-apụ na ngwaọrụ na ọnọdụ drone, ị nweta ogo dị mkpa, ị metụrụ bọtịnụ aka na njikwa Flypad ma ị na-efegharịrị n'ụgbọelu n'ụzọ ụgbọelu na enweghị nsogbu. Mgbe ahụ, mgbe ị na-efe n'ụgbọelu, ị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ ka ọ gbanwee ka ọ wee nwee ike ịgbanwe ọnọdụ ya wee nwee ike idowe ya n'ọnọdụ ziri ezi wee malite ife dị ka a ga - asị na ọ bụ ụgbọ mmiri nkịtị. Simpleda dị mfe ... Ma ọ dị mfe!.
Parrot Swing, ngwakọ dị n'etiti mmiri na ụgbọelu rc
The Parrot Swing na-arụ ọrụ dị ka ụgbọelu rc na dị ka drone, mana dịka a tụrụ anya ya apụtaghị ìhè karịsịa na nke ọ bụla n'ime echiche abụọ ahụ. Na larịị drone, ụgbọ elu ya dị mfe, nke bụ isi a na-eme ọnọdụ ofufe a naanị iji mepụta mbupu na ọdịda nke ngwaọrụ ahụ.
Na ọkwa ụgbọ elu rc anyị kwesịrị ịkọwapụta nke ahụ ọ bụghị ngwa ngwa gabiga ókè, na-eru ọsọ nke 30 kilomita kwa awa, nke yiri ụgbọ elu ụgbọelu redio na-achịkwa. Yabụ ọ bụrụ na ijiri ụdị ngwaọrụ a mbụ, ị gaghị ahụ ihe ọhụụ na Swing.
Ma ihe na-atọ ụtọ bụ inwe ohere nke ịnụ ụtọ ụzọ ụgbọ elu abụọ n'otu ngwaọrụ ahụ. Drones dị mfe ịnya ụgbọelu na nke ahụ emeela ka mgbasa ozi ha nke ọma n'etiti ndị ọrụ, ebe ị na-efe ụgbọ elu rc dị ezigbo nhịahụ ebe ọ bụ na nsogbu ọ bụla n'oge ọdịda nwere ike ibibi ya. Na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Ngabiga Parrot na-enye ohere; Na ọ bụla onye ọrụ novice nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe nke ịkwọ ụgbọ elu rc na-enweghị ihe egwu ma na-enweghị ịme mmụta siri ike.
Flypad njikwa, a obi ụtọ
Na mgbakwunye na ịkụda Parrot, anyị enweela ike ịnwale Flypad, ọhụụ ọhụụ ọhụrụ ahụ, nke juru anyị anya nke ukwuu. A na-akatọ icheoku ogologo oge maka naanị inye onyinye nke obere minidrones site na ama, nke na-ekwenyeghị ndị ọrụ niile.
Na ngwụcha, icheoku ekpebiela ịkwụsị njedebe a na mwepụta nke Flypad, iwu nke anyị hụrụ n'anya nke ọma na nke ahụ ga-enye gị mgbakwunye na drones nke ika ahụ.
Uzo nke isi ihe na-adighi nma na nke abuo, ya na mmetuta di elu. Ọ bụ njikwa na-adị arọ, mana oge niile anyị nwere mmetụta nke ibu a jikọtara na ịdị mma na ịdị ike nke njikwa, nke mere na anyị na-ahụ ya dị ka ihe dị mma.
Autonomy nke drone na njikwa
Ngabiga ahụ na-agụnye batrị 550 mAh nke na-enye ihe 7-9 nkeji oge nwere onwe dabere na ọnọdụ ịnya ịnyịnya gị, ebe ọdụ Flypad dịruru awa 6 n'ihi batrị 200 mAh ya.
Ihe ọchị iji
Mgbanwe site n'otu ọnọdụ ụgbọ elu gaa na nke ọzọ dị mfe ma baa uru
Flypad njikwa na-arụ ọrụ dị ukwuu
Nwere ike na-efe efe na-enweghị ikuku
O dikwa obere njem dika ugbo elu
Icheku Ngabiga ọgwụgwụ
Parsọ Parrot bụ Ngwaọrụ na-atọ ọchị nke ahụ ga-emekwa ka ị na-ekpori ndụ oge ị na-anya ya. A na-eleba anya ya na mpaghara ahụ ebido. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ aka na ụgbọ elu nke drones na ụgbọ elu rc, ọ bụ eziokwu na ọ ga-ahapụ gị ịchọrọ ọsọ ọsọ na nsogbu ụgbọ elu, mana nke ahụ abụghị ndị na-ege ntị maka ụdị ngwaọrụ a.
Ebee ka ịzụta rotgba Etu Parrot?
Have nwere Parrot Swing na njikwa Flypad maka ọrịre na ọnụahịa nke € 139,90 na weebụsaịtị toytrónica.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Icheku Ngabiga analysis, ọkara drone ọkara RC ụgbọelu
HTC na eze na-eweta ihe ọhụrụ HTC U Ultra na HTC U Play iji zere nsonaazụ na-adịghị mma
Android Wear 2.0 na-abịa smartwatches dakọtara na February